IDRA-21 powder (22503-72-6) hplc = 98% | AASraw Nootropics powder
/ Products / Nootropics powder / IDRA-21 poda (22503-72-6)
MUTSVENE unobatsira nekugadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika kuhuwandu hwe IDRA-21-powder (22503-72-6), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Molecular Kurema: 232.69
Raw IDRA-21 powder mukusimudzira uropi hunoita nekuwedzera kumwe
Parizvino, pane kungova nemuedzo pamhuka, kunyanya mbongoro uye rats, izvo zviviri zvakaratidza kucherechedza kugadzirisa kugadzirisa nekusaonekwa kwakashata kwemigumisiro. Nhamba yemonke dzaiva pa 3 kana 5.6 mg / kg, iyo yaitungamirirwa mukuziva kuti IDRA-21 powder yakanga iri 10X ine simba kupfuura dzimwe nootropic.
Kunyangwe pane iye zvino haisi kubudiswa zvidzidzo zvemakiriniki zvinotarisa kuyerwa kwevanhu kushandiswa, kune dzakawanda zvepamusoro-kuongorora nzvimbo dzepaIndaneti dzinoratidza zviitiko zvakanaka apo IDRA-21 poda yakatorwa inotorwa nemuromo. Izvo zvakakurudzirwa kukurudzira kugadziriswa kwemashoko zviri pa 5-25mg.
Iyi mitemo inoda kunyatsofungisisa, kunyanya sezvo migumisiro ye IDRA-21 powder inogona kuramba ichikwanisa kusvika maawa 48. Kana imwe nhengo ye5 mg inotorwa, isingaoneki iyo inogona kuitika ipapo, chero mimwe mitero yakatorwa inofanira kuve neuchenjeri inopihwa kuti pangangodaro kugoverana kwe nguva inogona kukonzera matambudziko.
Yambiro pamusoro pemvura yakakura IDRA-21 powder
Mukuenzanisa nezvimwe zvekare zvinonzi nootropics, IDRA-21 powder haina zvishoma pamigumisiro. Zvinonyanya kukosha, zvinogadzirisa zvazvinoda kuita, nekusimbisa kumuka, uye kuwedzerwa kukwanisa kudzidza uye hazviiti zvimwe zvakawanda. Izvi zvinotsigirwa nemishumo inobva pane zvidzidzo zvitsvakurudzo zvevechidiki vakuru rhesus mbongoro uye kuenzanisa kukwanisa kudzidza.
Inofanirawo kuonekwa mune zvidzidzo kuti migumisiro yeDRA-21 yakasvibira yakasvikira kusvika maawa 48. Zvitsvakurudzo zvakave zvichiratidzawo kuti IDRA-21 powder i10X ine simba rinopfuura rekuti Aniracetam, iyo inorayirwa mishonga muEurope ine zvimwe zvakafanana kune INDA-21. Uyewo, migumisiro ye IDRA-21 powder inogona kuramba ichikwanisa kusvika mumazuva 3 ichienzaniswa newindo 2-3 yeAniracetam.
Anecdotal mushumo nevanhu vakashandisa IDRA-21 poda yakasvibiswa vaisanganisira manzwiro ekufunganya zvishoma uye musoro Nyaya iyi yekuita ingave yakakonzerwa nokushandiswa kweU IDRA-21 powder nevanhu vane hutano hwepamusoro kana huwandu hwezvinhu zvehutsanana hwakanyanya zvinonyatsoda kushandisa IDRA-21 powder.
Zvinokurudzirwa kuti vanhu vachangobva kupora; vane nhoroondo yekurohwa kana kuti ndiani ane ngozi yekurohwa haafaniri kushandisa IDRA-21 poda yakasvibirira. Neural mitambo yakatovhiringidzika kana yakasvibiswa inogona kukuvara nyore nyore nekushandiswa kwezvimwe zvidimbu kana zvinoumba zvinokurudzira kana kukurudzira basa rekutengesa neuro.
Parizvino, hapana mimwe mitemo inoshandiswa pakushandiswa kweIDRA-21 powder paunoshandisa mishonga inorayirirwa kana kuti inogadziriswa pane zvinorapa zvirwere. Asi kunetseka kwakasimudzwa pamashandisirwo emanotropics panguva imwechete sekushandisa kushandiswa kwevanhu vanodzvinyirira sezvo kusanganiswa kunogona kuunza mamiriro ezvinhu akaoma
IDRA-21 powder inenge ichangobva kuwanikwa neotropic. Inoshanda seymakine stimulant drug uye ikozvino inotsvakurudzwa maererano nemigumisiro yayo mukuvandudzika kwechirangaridzo, kugadzirisa pfungwa, kukurudzira, uye kugadzirisa kukanganisa kwepfungwa. Zvichida zvakagadzirwa muC1994 kana 1995 semakiriniki ekutanga emakiriniki uye zvinyorwa zvekuongorora zvakarongeka zvakaonekwa mumabhuku e1995.
(1) IDRA-21 powder Mechanism Of Action
IDRA ndeyekirasi yezvikwata zvinonzi ampakines. Ampakines ari allosteric modulators ye AMPA receptors muuropi. AMPA receptors inokonzera kushandiswa kwema-synaptic nokukurumidza uye inoshandiswa mu synaptic plasticity uye nguva refu.
SekuAmpakine, IDRA-21 poda yakashata inoshanda nekugadzirisa AMPA receptors muuropi. Kunyanya iyo IDRA-21 powder inosungira kunzvimbo yeallosteric ye AMPA receptor uye inokurudzira kugadzirisa mafungiro, iyi dzimwe nguva inonzi inonzi allosteric activation.
Kutsvakurudza kwokutanga pamusoro peDRA-21 poda yakasvibisa inoratidza kuti inogona kudzivirira AMPA receptor deensitization uye naizvozvo kuwedzera mhinduro dzechigodhi uye chiyeuchidzo chekusimbisa nekudzidza.
(2) Inoshanda sei?
IDRA-21 poda yakasanganiswa ipakine ampakine uye ampakines inobata receptors muuropi yako inonzi AMPA receptors. Izvi zvinogamuchirwa zvinokonzera kukurumidza kwekukurukurirana pakati peeuroponi dzeuropi, pamwe nekuwedzera kukudzidzira nekuyeuka.
IDRA-21 powder inosunga kune avo vanogamuchira muuropi iyo inotungamirira kutarisa, kuchenjerera, nekuita. Iko inowedzerawo migumisiro yemamwe maurotransmitter europi, kunyanya glutamate. Glutamate ndeimwe yeiurotransmitter inonzi 2 inokosha inowanika muuropi uye inofanirwa kufunga kwekukurumidza, kuwedzera kwekutsvaga, kunyanya kutarisa, nekuvandudza unyanzvi hwekugura.
(3) IDRA-21 powder Mipiro
• Kuwedzera kwekugogodza (Kufananidza miitiro inoshandiswa neRhesus Monkeys)
• Kuwedzerwa Basa rakarurama
• Kuwedzerwa muKfupi Yenguva Pfupi
• Zvichida Kukonzera Kurapa PaSchizophrenia
• Kukanganisa Kunoita Kurapa Pakuderera
• Kubatsirwa neAlprazolam-induced Cognitive Deficit
Nzira yekutenga IDRA-21 powder kubva kuAASraw